Wararkii ugu dambeeyay dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Baar-Sanguuni | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Wararkii ugu dambeeyay dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Baar-Sanguuni
Kismaayo (Halqaran.com) – Waxaa faah-faahin dheeraad ah ka soo baxaya dagaal maleeshiyaadka Al-Shabaab iyo Ciidamada Jubbaland ku dhexmaray duleedka Magaalada Kismaaayo ee xarunta KMG Maamulka Jubbaland.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii xubno ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen Saldhiga Ciidamada Jubbaland ee deegaanka Baar Sanguuni, halkaasi oo labada dhinac si adag isugu fara saareen.
Wararka ayaa sheegaya, in dagaalkan uu ahaa mid aad culus, waxa ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, kaasi oo dhaliyay khasaare.
Dhinacyada dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa in uu gaaray khaasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac, hase ahaatee Al-Shabaab ayaa war ay baahiyeen waxa ay ku sheegeen in ay dileen 5-askari oo ka tirsan ciidamada dowladda 9-kalana ay dhaawaceen.
Sarakiisha ciidamada dowladdu wax war ah kama aysan soo saarin dagaalkaas waxaase jirta Alshabaab in ay sidaan oo kale dhowr jeer weeraro uga geysteen deegaanka Baar-saanguuni ee ku yaalla duleedka Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Ugu dambeyn, xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa ah mid caadi ah, inkastoo Ciidamada Jubbaland ay wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo duleedka deegaaanka Baar Sanguuni ah.